ရုံဝင်ခဈေး အများ ဆုံးရုပ်ရှင် ရုံ မြန်မာ နိုင်ငံဉ် ဖွင့်လှစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရုံဝင်ခဈေး အများ ဆုံးရုပ်ရှင် ရုံ မြန်မာ နိုင်ငံဉ် ဖွင့်လှစ်
ရုံဝင်ခဈေး အများ ဆုံးရုပ်ရှင် ရုံ မြန်မာ နိုင်ငံဉ် ဖွင့်လှစ်
Posted by etone on Sep 13, 2010 in Myanma News, News |4comments
News ရုံဝင်ခဈေး အများ ဆုံးရုပ်ရှင် ရုံ မြန်မာ နိုင်ငံဉ် ဖွင့်လှစ်
အနိမ့်ဆုံး ရုံဝင်ခသည် ပင်လျှင် ၁၅၀၀ကျပ်ခန့် ကျသင့်သည့် ရုပ်ရှင် ရုံအား မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန် မြို့ဉ် စတင် ဖွင့်လှစ် တော့ မည် ဟု သတင်းရရှိသည်။Junction Center (Maw Tin)ဉ် Junction Cineplex ဟု အမည်ပေးထား သည့် ဈေးဝယ်ဌာန ဉ် တွဲ ဖက်ထားသည့် ခုံ ၂၂၀ဆန့် ရုံ နှစ်ရုံ ဉ် လူဦးရေ ၄၆၀ခန့် ဆန့် သည် ဟုရုပ်ရှင် ရုံ အကြိုဖွင့် ပွဲဉ် တက်ရောက်လာသည့်စာနယ်ဇင်း ဆရာများ ကို ပြောသည်။
Junction Cineplex ရုပ်ရှင် ရုံသည် ရုပ်ရှင်ရုံ တည်ရှိ ရာ Junction Center (Maw Tin) သည်Shopping Center လည်းပါရှိသဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ပထမဦး ဆုံး ရှော့ပင်း စင်တာ နှင့် တွဲ ဖက်နေသည့် ရုပ်ရှင် ရုံဟုညွှန်းဆို ထားသည်။ တနေ့ လျှင် ရုပ်ရှင် ငါးပွဲ ပြသမည် ဖြစ်ပြီး ရုံဝင်ခ နှုန်းထား များ မှာ အနိမ့်ဆုံး ၁၅၀၀ မှအမြင့် ဆုံး ၆၅၀၀ ဈေးနှုန်း ရှိသည် ဟု သတ် မှတ် ထားသည်။
အမေရိကန် နိုင်တ၀ှမ်း တွင် ဖွင့်လှစ် ထားသည့် နာမည်ကျော် Megaplex ရုပ်ရှင် များသည် ပင်ရုံဝင်ခ (ကြိုက်သည့် အတန်းမှ ကြည့်) ၈ ဒေါ်လာ ခန့် သာ ရှိပြီး ဂျပန် တိုကျိုမြို့ ရှိ ရုပ်ရှင် ရုံများမှာမူ အမေရိကန်ဆယ်ဒေါ်လာခန့် ဝင်ကြေးရှိသည်။ထိုနိုင်ငံ များ ၏ရုပ်ရှင် ရုံများ မှာ မြန်မာရုပ်ရှင်ရုံများထက် ဈေးနှုန်းမြင့် သော်လည်း ရုံဝင်ခ ကြေးမှာ ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ လုပ်ခ လစာ မှာ အနိမ့်ဆုံး
တစ်နာရီ ၀င်ငွေ ထက်ပင် နည်းပါးနေသေးသည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန် မြို့ တွင် သမ္မတ ဟိုတယ် နှင့် တွဲဖက်နေသည့် သမ္မတ ရုပ်ရှင် ရုံမှာ လူကြိုက် အများ
ဆုံးဖြစ် ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ရုပ်ရှင် ရုံများ တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ မည် ကို စိုးရိမ် သောကြောင့် လုံခြုံရေး
သူလုပ်တာနဲ့ တခြားရုံတွေဈေးတက်ကုန်တော့မှာဘဲ။ 3D ရုပ်ရှင်ဆိုလည်း တမျိုးပေါ့။ မနေ့ကဘဲ သွားလည်ပြီးပြီ ဘာမှလည်း ထူးပါဘူး နိုင်ငံခြားက ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ လုပ်ထားတာဘဲ ဈေးဝယ်ရတာတော့ ဆွဲဆောင်မှု မရှိဘူး။ ဆိုင်ခန်းတွေလည်း ပြုပြင် မှုတွေ မပြီးသေးဘဲ ဖွင့်တယ် အထဲမှာ ထုသံ ရိုက်သံနဲ့ ဆေးနံတွေ ကို မွန်နေတာဘဲ။ မြန်မာပြည်မှာ သူနဲ့ ပြိုင်ဘက်မပေါ်သေးတော့ နဲနဲတော့ ခက်တယ် ပြိုင်ဘက် အမြန်ပေါ်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးကြီးကြီးပေးကြည့်ကြမယ့် အသစ်ကြိုက်သူတွေနဲ့ အတွဲတွေတော့များမှာပါ။
ကျွတ်တော်တို့ ရွာက ဆရာတော်ဘုန်းကြီး အခု တော်တော်အခြေနေဆိုးနေပါတယ်
ဘုန်းကြီးပျံ ပွဲတော်ကြလျှင် အလကားကြည့်ရပါစေ့မယ်
တော်သေးတာပေါ့ သမ္မတ ရုပ်ရှင်မှာ ဒီနေ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မလို့
သွားရဲတော့ဘူး . . . Maw Tin Junction က ၁၅၀၀ ၊ ၂၅၀၀ နဲ့ အတွဲခုံကတော့ ၆၅၀၀ တဲ့ . . . တစ်ခြားရုံတွေနဲ့ ဘာကွာလို့လဲ ?